साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै, भारत आठौं पटक च्याम्पियन – Sandesh Press
October 16, 2021 138
काठमाडौं । साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फुटबल फाइनल खेलमा भारतले नेपालविरुद्ध तेस्रो गोल गरेको छ । माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा जारी खेलको दोस्रो हाफमा भारतले तेस्रो गोल गरेको हो ।
यसअघि खेलको दोस्रो हाफमा ५० औँ मिनेटमा सुरेश सिंहले भारतको लागि दोस्रो गोल गरेका थिए । यस्तै खेलको दोस्रो हाफमा भारतका कप्तान सुनिल क्षेत्रीले भारतलाई खेलको ४९ औँ मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । एक मिनेटको अन्तरमा भारतले दुई गोल गर्दै अग्रता लिएको हो ।
पहिलो हाफको खेलमा नेपाल र भारत दुवै टिमको तर्फवाट कुनै पनि गोल हुन सकेन् । पहिलो हाफमा वर्षाका कारण दुवै टीमका खेलाडीले खुलेर खेल्न सकेनन् । नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जोङले राम्रो प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई गोल हुनवाट बचाएका थिए ।काठमाडौं । साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फुटबल फाइनल खेलमा भारतले नेपालविरुद्ध तेस्रो गोल गरेको छ । माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा जारी खेलको दोस्रो हाफमा भारतले तेस्रो गोल गरेको हो ।
पहिलो हाफको खेलमा नेपाल र भारत दुवै टिमको तर्फवाट कुनै पनि गोल हुन सकेन् । पहिलो हाफमा वर्षाका कारण दुवै टीमका खेलाडीले खुलेर खेल्न सकेनन् । नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जोङले राम्रो प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई गोल हुनवाट बचाएका थिए ।
Prevहातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट, पेशा- गृहिणी ?
Nextदशैँको समयमा अर्का महत्वपुर्ण ब्यक्तीको निधन ! डिसी परिवार शोकमा
घरमा ग’र्भ’वती श्रीमती : बुलेट बाइकमा साली बोकेर श्रीमान फ’रार